FEELM = Ichokwadi Inzwa + Metallic Film
FEELM ine shungu yekuvandudza iyo vaping chiitiko chevakuru vanoputa vane hunyanzvi hwekutsva tekinoroji nemidziyo. Kubatanidza Metallic Firimu neCeramic Kondakita, ino shanduko tekinoroji budiriro mune zvechinyakare Zvishandiso uye Structural Sayenzi, inomiririra muganho mutsva muovhoni atomization indasitiri.
FEELM inonyatsoenderana neFilm Vaping Technology muClosed Pod System, ichiunza kuravira kukuru uye chiitiko chinoshamisa chekufema kune vanofarira e-mudzanga, uye kuputa chaiko kunonzwa kune vanhu vakuru vanoputa.
Tekinoroji yeFEELM yakagadzirwa mu2016 neSMOORE International Holdings Limited (Stock Code: 6969.HK), kambani yemubereki yeVAPORESSO, CCELL neMETEX.
Global Market Kugovana
• SMOORE yakavambwa
• Yakabatana ne NJOY, yakatanga MAMBO
• Yakabatana neAltria, yakavakwa MarkTen yakasarudzika fekitori
Inotumirwa neindasitiri-inotungamira R&D Center, inotarisana neCeramic Heating Technology
Yakagadzira chizvarwa chekutanga Ceramic Coil T28
Yakagadzwa SMOORE Changsha Research Institute
• Yakatangwa T29 Metallic Firimu Ceramic Coil
• Yakagadzwa SMOORE Shenzhen Research Institute
Vakabatana naRJ Reynolds, vakatanga Vuse Alto
Yakabatana neBAT, yakatanga Vype ePod
Yakabatana neRELX, yakatanga RELX Classic muChina
• Yakatangwa NJOY ACE
• Pasi rose rakazivisa Heating Technology brand FEELM, yakahwina Golden Leaf Awards
• Kutengesa vhoriyamu yeFEELM mukati mehombodo kwakapfuura 100 Million
• Yakaburitswa "FEELM mukati" Global Technology Authentication Trademark
• Yakavaka pamwe Nyika Yakakura Kupfuura E-cig Exclusive Fekitori neRELX
• Inogadzira hunyanzvi hweFEELM mukati mehombodo dzakapfuura 1 Bhiriyoni zvidimbu
Ceramic Heating Technology yakawana iyo yekutanga China Patent Kunaka Mubairo muindastiri
• SMOORE Kuongorora uye Kuedza Center yakapasa CNAS yekuongorora bvunzo
• Yakagadzwa SMOORE Tangshan Research Institute
• SMOORE yakanyorwa paHKEX (kodhi yemasheya: 6969.HK)
Won iF Dhizaini Mubairo 2020
Inoshandisirwa zvinopfuura 1600 Global Patents
Yakagadzwa muna 2006, SMOORE International Holdings Limited ndeyeNational High-tech Enterprise uye mutungamiri ane mukurumbira pasi rose mukupa maatomization tekinoroji mhinduro. Iyo yakasarudzika muatomization tekinoroji pamwe nekusimudzira, kugadzira uye kutengesa kweaceramic conductor.
SMOORE inokoshesa kukosha kukuru kuR&D uye hunyanzvi. Nenhengo dzepakati dzakapedza kudzidza kumayunivhesiti epamusoro seGeorgia Institute of Technology, Purdue University, Tsinghua University, uye Chinese Academy yeSainzi, SMOORE parizvino ine zvitupa zvinopfuura 1600 zvepasirese, inovhara minda yakati wandei senge maceramic conductor uye maatomu emagetsi.
Kutenda kune yekucheka-kumucheto atomization tekinoroji, SMOORE zvigadzirwa zvakawana WM, RBA, EICC, BSCI, GMP, cGMP uye TUV zvitupa uye zvakatumirwa kune anopfuura makumi mashanu nyika nenzvimbo kutenderera pasirese. Kuenderera mberi nekupa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye sevhisi, SMOORE rave rinotungamira pasi-rese atomization tekinoroji chikuva, inogamuchirwa zvakanyanya uye inofarirwa nevashandisi vekupedzisira.
Nekuda kwehunyanzvi hweR & D tekinoroji, yakasimba yekugona kugona, yakakura-chakapetwa chigadzirwa portfolio uye akasiyana vatengi zvigadziko, sekureva kwaFrost & Sullivan, SMOORE yaive yepasirose yakakura yekugadzira chishandiso chigadzirwa maererano nemari, kuverenga 16.5% yemutengo wese wemusika, muna 2019.
Midzanga Yekupisa, E Liquid Vapor Midzanga, E Midzanga Blister Pack, Kusvuta Imwe nzira, Epen, Newport E Midzanga,